म्युचुअल फण्ड भनेको के हो ? किन गर्ने लगानी ? ~ Banking Khabar
म्युचुअल फण्ड भनेको के हो ? किन गर्ने लगानी ?
बैंकिङ खबर । पोर्टफोलियो मेनेजरद्धारा व्यवस्थापन र संचालन गरिने धेरै साना साना लगानीकर्ताहरुबाट संकलित कोष नै म्युचुअल फण्ड हो । नेपालमा म्युचुअल फण्डलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले नियमन र निरीक्षण गर्दछ । नेपालमा म्युचुअल फण्ड जारी गर्ने, निरीक्षण गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने सम्पूर्ण कार्य म्युचुअल फण्ड नियमावली २०६७ ले निर्धारण गरे अनुसार र धितोपत्र बोर्डले तोके बमोजिम हुने गर्दछ । नेपालमा म्युचुअल फण्ड, म्युचुअल फण्ड नियमावली २०६७ र म्युचल फण्ड निर्देशिका २०६९ बाट नियन्त्रित छन् ।
किन गर्ने लगानी ?
म्युचुअल फण्डमा लगानी गर्नका लागि ठूलो पुँजीको आवश्यकता पर्दैन । न्युनतम एक हजार रुपैयाँमा नै लगानीको सुरुवात गर्न सकिने भएकाले ससाना लगानीकर्ताले पनि यसबाट लाभ लिन सक्छन् । कोष प्रबन्धकहरूले म्युचल फण्डको तपÞर्mबाट कार्यसम्पादन तथा व्यवस्थापन गर्ने भएकाले बार्षिक रुपमा प्रतिफलबाट नै व्यवस्थापन शुल्क लिने गर्छन् । प्रोफेसनल व्यवस्थापकद्धारा व्यवस्थापन गरिने, पारदर्शी हुने, न्युन कारोबार शूल्क र सानै स्रोतबाट लगानी गर्न सकिने हुँदा नयाँ लगानीकर्ता, सेयर बजारको घटबढका बारेमा जानकारी नभएका साना लगानीकर्ताहरुका लागि म्युचुअल फण्ड लाभदायक मानिन्छ । यस्ता म्युचुअल फण्डहरु लगानीको विविधिकरण र कर सुविधाका साथमा सहजै र छिटो किनबेच गर्न सकिने भएकाले पनि लगानीको सुरक्षित क्षेत्र मानिन्छ ।
संरचनागत रुपमा म्युचुअल फण्ड दुई प्रकारका हुन्छन् : खुल्ला समाप्ति कोष र बन्द समाप्ति कोष ।